Cap / clsi Uhlobo mina okuphezulu Pure Water Factory, Suppliers | China Cap / clsi Uhlobo mina okuphezulu Pure Abakhiqizi Water
Ikhaya» imikhiqizo » Isisetshenziswa Laboratory » Amanzi Ukuhlanzwa Systems » CAP / CLSI Uhlobo mina amanzi okusezingeni eliphezulu okumsulwa
Smart Rob uhlelo angakhiqiza CAP / CLSI Uhlobo mina amanzi reagent ngoba analyzer.It emtholampilo kwenza uxhumano eqondile ukusebenza ku-intanethi. Independent inhlukano ukulawula amanzi esidayisa ingasetshenziswa zokusebenza ezengeziwe.
Heal Force isungule Pureforce Roe imodeli, ngokukhethekile okusezingeni eliphezulu isixazululo amanzi olindele laboratories. Kuhlanganisa nge electrodeionization module, Pureforce Roe kungaba njalo ukuphakela-type II manzi ahlanzekile
Pureforce Roe uzibekile izindinganiso izinga, design kanye emisha ukuthi livela ifa eminingi isipiliyoni ukusatshalaliswa eyodwa yamanzi laboratory.
Pureforce Roe inikeza izinga okusezingeni feed amanzi amaningi othomathikhi analyzers kwamakhemikhali kanyekanye ngokusebenzisa iluphu ukusatshalaliswa